Goraksha Online -
दाङ,१८ असार । एसिया हाप्किडाे च्याम्पियनसिप-२०२२ को पहिलो दिन भएका खेलमा नेपालले एक स्वर्णसहित दुई काश्य पदक जितेको छ । उज्बेकिस्तानको फर्गानामा १ जुलाईदेखि २ जुलाई आजसम्मलाई आयोजना भैरहेको एसिया … Read More
खेमराज रिजाल बेलझुण्डी, १८ असार । बाह्रौं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता उद्घाटन भइरहँदा खेल क्षेत्रमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले दाङ जिल्लालाई खेल क्षेत्रको एरिना (खेलाडीहरूको घम्साघम्सी गर्ने स्थान) हो, बताइरहँदा पछिल्ला केही … Read More
घोराही न्यायिक समितिमा १ सय ३४ मुद्दा
गोरक्ष समाचारदाता दाङ, १८ असार । घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १ सय ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको असार १६ गतेसम्म १ … Read More
दाङ,१८ असार । सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले तुलसीपुरमा रहेको एरपोर्ट र घोराहीमा औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि ब्ढने बताएका छन् । एरपोर्ट सञ्चालन र औद्योगिक स्थापना भएमा जिल्लाको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण … Read More
होटेल व्यवसायको विकासले पर्यटन क्षेत्रको विकास : मन्त्री चौधरी
शिवराज खनाल दाङ, १८ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पर्यटन, पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीले होटल व्यवसायको प्रबद्र्धन भएमा मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताएका छन् । लमहीमा निर्माण … Read More
विनोद पोख्रेल २०७७ चैत ३ गते हिजो पनि बिहान त अलि सुनै बित्यो । हामी दुई जना मात्र तर दिउँसोबाट रमाइलो भयो । खाना खाएर म निद्राबाट नव्युँझँदै प्रकाश (सालो) … Read More
साहित्यकार यम रेग्मीका तीन गजल
(१) पवन हुँ ! रुक्न नपरोस् हिमाल हुँ ! झुक्न नपरोस् जे–जे गरुन् अरु जिन्दगीमा सरिता हुँ ! सुक्न नपरोस् स्वार्थको रङले होली खेलिरहेछन् सजल हुँ ! चुक्न नपरोस् अग्निको … Read More
प्रेरणाको विन्दु : भगवानसँग सम्बन्ध
एक पटक एकजना पण्डितजीले एउटा पसलेकहाँ गएर पाँच सय रूपैयाँ राख्न दिए । उनले सोचे छोरीको बिहे गर्ने बेलामा यो पैसा लिन्छु । केही वर्षपछि छोरीको विवाह हुने पक्का भएपछि … Read More
नेपालमा शासनको झलक
युवराज शर्मा नेपालको शासन व्यवस्थामा व्यवास्थापिका, कार्यपलिका र न्यायपालिकाहरुका स्वरुपहरु फरक–फरक कार्यशैलीका छन् । सबैले नागरिकलाई कानुनी दायरामा राख्छन् । कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले होला, … Read More
न्यायमा बिचौलियाको खाद
सुभाष न्यौपाने न्यायालय भित्रै हुन्छ रे वार्ता घुसको । मुनाफामा डुबाइ बाल्छन् आगो भुसको ।। जनता जाऊन् चाहे भड्खालोमा । न्यायकर्मी मिले न्याय मिल्छरे जालोमा ।। वकिल न्यायधीशको बीचमा घुसको … Read More
देउखुरी,१७ असार । दाङको देउखुरीमा पुल निर्माणको लागि खनिएको गाडलमा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । गढवा गाउँपालिका–१ रङसिङ खोलामा पुल निर्माण हुँदै गरेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर शुक्रबार … Read More
शिवराज खनाल घोराही, १७ असार । सहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताएका छन् । दाङको लमहीमा सञ्चारकर्मीहरुसंग मन्त्री चौधरीले आउँने … Read More
घोराही, १७ असार । दाङमा मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य दुई जना गम्भीर घाईते भएका छन् । बिहीबार बेलुकी पौने ९ बजेतिर घोराही … Read More
खेमराज रिजाल बेलझुण्डी १७ असार । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला दुई महिनासम्म पनि खुलेको छैन । ताला खोल्ने सन्दर्भमा रजिष्टार माधव अधिकारी नेतृत्वको वार्ता टोलीले काठमाडौँमा तालाबन्दी … Read More
तुलसीपुरको वडास्तरीय बजेटको सिलिङ्ग ७० लाख
बालाराम खड्का तुलसीपुर, १७ असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडाहरुमा आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यक्रममा वडास्तरीय सिलिङ्ग ७० लाख तोकेको छ । आगामी बर्षका लागि सबै वडाहरुले सोही बजेटमा वडास्तरीय … Read More
सकारात्मक उर्जा तनाव व्यवस्थापनको मन्त्र
भूवन पोख्रेल तनाव हाम्रो दैनिक क्रियाकलापबाट सिर्जना हुने जीवनको एउटा हिस्सा हो । हामी विभिन्न कारण जस्तै प्रियजन गुमाएको, सम्बन्ध बिग्रेको, नोकरी छुटेको आदिले तनावको शिकार भइरहेका हुन्छौँ । वास्तवमा … Read More
लक्ष्मण बस्नेत दाङ,१६ असार । दाङ जिल्लास्तरीय १२ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता २०७९ शुक्रबारदेखि सुरु हुदैछ । नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तत्त्वावधान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संयोजकत्वमा … Read More
दाङ,१६ असार । महर्षी वैदिक फाउन्डेसनको चेतनामा आधारित शिक्षाको प्रवर्दन विषयक कार्यक्रम विहिवार घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा राष्टिय तथा अन्तराष्टि«य ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरुको सहभागीता कार्यक्रम भएको थियो । … Read More
नेपालबाट १ करोड ३२ लाखको ‘कपाल’ निर्यात
दाङ,१६ असार । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ११ महिनाको अवधिमा नेपालबाट एक करोड रुपैयाँ बढीको कपाल निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउन–जेठ अवधिमा नेपालबाट १ करोड ३२ … Read More
अमरराज आचार्य दाङ, १६ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को ११ महिनामा कुल बजेटको ५४.८६ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा … Read More
अमरराज आचार्य दाङ, १६ असार । झिमझिम पानी परिरहँदा खेतमा पसेका किसानको अनुहारमा खुसी देखिँदैन । मानो फालेर मुरी फलाउने आशाका साथ खेत छिर्ने किसानहरु मलविनै धान रोपिरहेका छन् । … Read More